Yintoni ebonwa ngokuba yiyona ndlela i-aphrodisiac?
Njengoko izazinzulu zibonise, amandla, ukungafani kolwazi kunye nezinye izinto ezichaphazela iimvakalelo zethu ziza kuthi ngevumba. Kalula nje, ngenxa yempumlo yakhe, umntu unokubonisa ibini nesimo sengqondo esifanelekileyo. Akumangalisi ukuba izilwanyana zinemvelo, i-flair evumela ukuba indoda ibone iqela layo leekhilomitha ezininzi, ngenxa yomsebenzi wabamkeli beesaphetha. Kodwa inkqubo yokubamba ezi zinto ezincinci ezikhutshwa ngumzimba womntu kunzima kubantu.
Oku kubangelwa kukuba umntu wanamhlanje utyumbile ukuvumba kwendalo ngenxa yokugqoka iimpahla ezininzi, amafutha amaninzi, ama-creams, imimoya, engumqobo ongavumelekanga ukuba uziva kwaye ubambe iinqununu zemiba ephazamisa umzimba womntu.
Emva kokufuthwa, inkunkuma ingena kwinkqubo ye-olfactory, kwaye isebenze imimandla ejongene nemvakalelo yesondo kwingqondo. Ukongezelela, i-aphrodisiacs inceda ukuvelisa ingqondo nomphefumlo ukuze kufike kwindawo yokuphumla, ukuchuma nokuthembela. Banceda ukukhulula ukuvakalelwa kwebala kunye nokungaqiniseki, ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi kwizitho zengqungquthela kunye nokuqhelanisa umsebenzi wenkqubo yesondo yomntu.
Kwiminyaka emininzi, izazinzulu emhlabeni wonke ziphazamiseka ngokukhangela "izinto zokuthanda" ekudleni, izityalo, izithako zeekhemikhali, kunye neziyobisi kunye notywala, ngethemba lokuba ubuncinane into eya kuvelisa umphumo wamagicikha.
Imvelaphi yeendlela eziyimfihlakalo, oko kuthiwa ngamakha amaninzi okuthandwa, ukukhuthaza umdla kunye nokukhwabanisa ngokwesondo, inomlando omde. Imbono "ye-aphrodisiacs" yeza kuthiwa evela kwiGrisi yamandulo, okuthetha "ukuzonwabisa okuthandwayo", ezi zinto zabizwa ngokuba ngumthikazi ongumGrike uAphrodite, uTHIXO Wothando! Ngokweengcali zenzululwazi zisekuhlaleni kwimvelaphi yezityalo kunye nezilwanyana ezenziwe i-aphrodisiacs. Ngokomzekelo, amaGrike ngokwabo adibanisa izitya ezahlukeneyo izitho zomzimba zenkomo entsha yenkomo. Ubunzima obuvela kwiimpondo zedaka okanye i-rhinoceros, amaShayina angeniswe kwiFiyi. Funda kwakhona ingcambu "yegolide" yeginseng. Kwaye eAfrika, "ukuthanda ukutya" kwakucatshangwa njengomhla wokususa uxinzelelo, kunye nomthi we-violet, ingcambu yabo, ngokombono wabo, ikhuthaza umsebenzi wezesondo, njl njl. Ngaphandle kwesizathu, isakhiwo sezityalo ezininzi ezinama-ferromones esondo zifana nokwakhiwa kwezitho zobulili zamadoda nabasetyhini. Kwakhiwe kwakhona ukuba i-aphrodisiacs iyakwazi ukuvelisa izinto ezikhethekileyo, i-endorphins eyenza umnqweno wesondo ukhulise, ngaphezu koko, ngumlawuli omhle wesistim se-nervous, inceda ukuphumla ukuxhatshazwa, ukulungiselela amandla kunye nobomi.
Umntu akasoze akrokre ukuba ngaphezu kwee-oyile ezizodwa zokufikelela eziqukethe i-aphrodisiacs, ziyafumaneka kwindawo yokutya, ayenayo imihla ngemihla. Ngoko, umzekelo, ukususela kwinto elula kakhulu kunokwenzeka ukuba ungatshintshi i-tshocolate, enye yenye ye-aphrodisiacs eqinile, akusiyo nto into yokuba abathandi okanye abantu abajongene noxinzelelo bayisebenzisa ngokubanzi. I-Cinnamon, ngokungangabazeki, yenza njengento ephosakeleyo kakhulu, ngenxa yoluvo olumnandi olwenza ukuba lube lukhuni, lwandisa amandla, kwaye luvule iimbono zomntu ngokubanzi. Ngokubanzi, uluhlu lwee-aphrodisiacs ezinamandla ziphethwe yi-celery. Ngokwemiqathango yamanye amazwe, inxalenye encinci yesityambo esinamagatsha anamanzi ixhomekeke kumbhede omtsha, ukuphucula umnqweno. Kwakhona idumela le-aphrodisiac elinamandla lilawulwa yieshizi, ngokuyininzi ngokubunjwa. Kukho iintlobo ezinjalo ezibukhali, xa zivumile, abanye abantu banomdla kakhulu, abanye babonakala belahlekelwa iintloko zabo. Kwaye ngamandla ommandla ojikelezayo wabantu, kwanele nje ukudala umoya we-candlelit yokudla okuthandana kunye ne-strawberries kunye ne-champagne, kwaye ngenxa yoko unayo i-aphrodisiac enamandla.
I-oyile ebalulekileyo ye-ylang-ylang, i-patchouli, i-sandalwood, i-bergamot inomhlaba onamandla kakhulu ukuvuselela umnqweno wesondo. Zibuye zivuselele, zenzeke kwaye zinciphise isikhumba, zenze zibe zikhangele. Ngobuchule, imixube ekhethiweyo ikhupha iingcamango ezinokuthi zenze iimeko ezinzulu kwaye zomeleze intuition, ncedani amaqabane ukuba avelelane ngokuchanekileyo.
Kodwa, nangona kunjalo, nabani na ofuna ukuthenga amafutha abalulekileyo - aphrodisiacs, kufuneka kukhunjulwe ukuba kufuneka kuboniswe ukubonisana neengcali, njengokuba abanye bangalimaza, umzekelo, abantu abangahambisani naso nasiphi na isifo okanye ukuxhatshazwa.
Ukhuseleko lokutya kunye nomgangatho
Amanzi amancinci endlwini ayisiseko sobomi obukhululekile
Indlela yokuhlamba iimbumba kwiingubo
Indlela yokuzonwabisa nabahlobo ngo-Eva wonyaka omtsha
Ukusetyenzisela itafile yokudla isidlo sakusihlwa
Indlela yokukhetha isilinganiselo somgangatho
Ubomi bomntu u-Ekaterina Andreeva
Ikhefu "Isihendo SikaAdam"
Amandla kunye nokuvisisana nobomi: Ukusikwa kwe-Thai kwi-SPA-salon yaseBanyan Tree
I-Neuralgia ye-trigeminal okanye imbilini yesibindi, i-arteritis ye-temporal, ipheochromocytoma
I-cookie i-almond kunye ne-chocolate
Umculi wePop Irina Ponarovskaya
Inkolelo exabisekileyo: i-brooches yezilwanyana ezihlambulukileyo iVan Cleef & Arpels
Inkxaso elula yomfanekiso opheleleyo
Kutheni abantu behlamba?